ANTSAHAMANITRA : Lehilahy tra-tehaky ny Polisy teo am-pandrobana fiara
Fitarainana matetika voarain’ny Polisy misahana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra ny fandrobana fiara apetraka eny amin’ny sisin-dalana, na koa eny amin’ny “ parking” efa misy mpiambina mihitsy aza. 16 septembre 2020
Raha ny tatitra voaray momba ity tranga ity dia maro no efa lasibatra, indrindra moa fa ireo olona mametraka fiara amin’ny toerana tsy dia be olona mivezivezy loatra. Efa manana paikady mihitsy ireo jiolahy amin’ny famohana moramora ny fiara sy fitaomana ny entana angalarina ao anatin’ny fotoana fohy dia fohy, hany ka dia tsy mahita izay fihetsik’izy ireo akory ny manodidina.
Manoloana izany indrindra dia mandray andraikitra ny mpitandro filaminana amin’ny fanaraha-maso akaiky mba hisamborana ireo andian’olon-dratsy efa za-draharaha amin’ny fantanterahana ity vaky fiara ity. Omaly talata maraina, rangahy iray manodidina ny 40 taona no tra-tehaky ny Polisy teny Antsahamanitra teo am-panaovana ny asa ratsiny. Teo am-panokafana fiaran’olona nipetraka teny an-toerana ity farany no tsikaritry ny Polisy ary avy hatrany dia nosamborina mba hatao fanadihadiana. Ato ho ato moa ankoatra ireo mpanendaka sy mpangarom-paosy dia hisy ny fitsirihana ireo tambajotran-jiolahy mpandroba ny atin’ny fiara, raha ny loharanom-baovao ihany.